Pọtical Multi-Stage Centrifugal Pumps Nrụpụta na Suppliers - Ụlọ ọrụ China - Shimge Pump Industry Group Co., Ltd
Home > Ngwaahịa > Pọkụkụ Multi-Stage Centrifugal Pumps
Ndị na-esonụ bụ maka Pọkụkụ Multi-Stage Centrifugal Pumps metụtara Blt, M na-atụ anya inyere gị aka ka mma nghọta Pọtical Multi-Stage Centrifugal Pumps.
Mkpụrụ ụgbọ elu dị elu, Japan NSK bearings and cold-rolled 50ww800 akwụkwọ ntanetị silicon ígwè mere ka mgbapụta elu arụmọrụ, obere mkpọtụ na enweghị nchekwa-n'efu. Akara akàrà nke ejiri aka, IP55 nchedo nchedo, ọkwa klas nke nkuzi nke F, nke pụrụ iche "mkpọchi abụọ"; njedebe ikuku na-eme ka mgbapụta ahụ kwụsie ike nrụgide.
Ihe nkedo ihe eji akpa akpa na ihe nile achikota, enweghi ike ichogharia iji gbochie ogwe na akpo ihe ejiji, na ejiji ngwa ngwa, nfe ngwa ngwa na oru nchedo. akàrà bụ ihe na-eme ka ọkpụkpụ gọọmenti rụọ ọrụ nke na-eme ka ihe nkedo rụọ ọrụ dị elu na-eguzogide okpomọkụ, ndụ ogologo ndụ, mgbanwe dị mfe na àgwà ndị ọzọ dị ịrịba ama.
N'ịbụ ndị nkà na ụzụ welding ụwa laser kachasị elu, ọ bụghị iwepụ ọkụ, hụ na nnukwu ike na arụmọrụ. Usoro nhazi: nkenke nhazi, CNC lathe, CNC machining centre, nkà na ụzụ nke oge a dị ka usoro laser welding na nhazi ngwa.2T-4T bụ welding ntụpọ, 16T na n'elu bụ welding laser.
Ihe nkedo a na-awụgharị n'elu mmiri nke ikpo mmiri ozuzo nwere ike ibelata ụcha nsị nke nrụpụta dị iche iche na-egbochi ike ike mgbe ntancha mmiri na-agbanyeghachi n'ahụ ahụ.
A na-emepụta akụkụ ihe mgbapụta iji mee ka ọtụtụ ndị na-eme mkpọtụ, na-eme ka akụ na-ekpochi, na-eme ka usoro ihe nkedo na-emechi ọnụ, iji belata ọdịiche dị n'agbata ihe na-eme ka mmiri ghara ịdị ndụ, ma hụ na enwere ike, isi mgbapụta.
Ngwongwo nke na-egbuke egbuke nke na-egbuke egbuke na mma ezi ihu ọma, eziokwu ziri ezi dị elu, n'otu oge ahụ meziwanye ihe dị iche iche na-arụ ọrụ nke mgbidi na ntụkwasị obi nke mgbapụta ahụ.
Ụdị BL (T) nke dị nchara igwe na-eme ka ọkpụkpụ (nke a na-akpọ ebe mgbapụta) na-ekwusi elu nke arụmọrụ dị elu, ụda mkpọtụ, ịrụ ọrụ nke ọma, wdg. kọmpụta dum, ntinye ya dị mfe, ọrụ ya na mmezi ya.
Okpomọkụ ala: ụdị nkịtị: 0â "ƒ ~ 68â" ƒ ụdị ọkụ ọkụ: 0â "ƒ ~ 120" ƒï¼Œ
Ọnọdụ okpomọkụ: + 40â "ƒ,
Mgbanwe ihu igwe Max: 1.0MPa,
Ekwesiri iji moto nke ike di elu ma oburu na njiri ma obu viscosity nke onye obula di n'elu nke miri.
PH: 5 ruo 8
Ntinye ma nyefee na mmiri
Nkesa site na mmiri
Pịa nrụgide na aka
Nrụgide na-eme ka elu na-arị elu, hotels, wdg.
Mmetụta nrụgide maka mmiri mmepụta ihe
Nsogbu na-enye aka
Usoro usoro mmiri
Na-asa na nhicha
Ụgbọ mmiri asa tunnels
Usoro mgbanyụ ọkụ
Nyefe ego mmiri
Mmiri ume na ikuku ikuku (refrigerants)
Nchịkọta mmiri na-eri nri na condensate
Ngwaọrụ ngwaọrụ (lubricants jụrụ oyi)
Mmanụ na mmanya
Glycol na coolants
Usoro ntanetị nke Ultra-filtration
Usoro osmosis na-agagharị
Ntucha, ionizing, demineralizing usoro
Ogbugba mmiri n'ubi (idei mmiri)
Sprinkler ogbugba mmiri n'ubi
Ugbo ogwugba ocha
Ogbenye zuru ezu ma na-agbagha bọmbụ ọkọlọtọ abụọ
Nchedo clsas: IP55
Ngalaba ikpuchi: F
Voltage ọkọlọtọ Single phase 220V-50Hz Atọ atọ: 380 / 400V-50Hz
Egwuregwu Egwuregwu nke Ike (IEC60034)
Ọnụ ọgụgụ nke kachasị mkpịsị ntinye
Ọ bụrụ na nrụgide na mgbapụta dị ala karịa nrụgide vaịn nke onye na-ajụ, cavitation ga-eme, nke ga-emetụta arụmọrụ nke mgbapụta. Iji zere cavitation ma hụ na mpempe akwụkwọ mgbapụta nwere nsogbu kachasị elu, a ga-agbakọta isi kachasị elu dị ka ndị na-esonụ:
Pb: Ntụgharị nke ikuku, mmanya (N'okpuru usoro dị nso, ọ nwere ike iwere ya dịka nrụrụ usoro);
NPSH: Isi ihe dị mma, m (Bara uru na ọfụma Q-NPSH);
Hf: Nkwụsị nkwụsị izu nhụsịrị (Uru na mgbago zuru oke nke pipeline kwekọrọ);
Hv: Mkpụrụ vapor na-erughị ala, m (Ụdị nrụgide dị arọ na ọnọdụ kwekọrọ na ya, onye na-enweghị isi bụ mmiri, dị ka egosiri na fig4 n'aka nri);
Hs: Ogwe nchebe, m, izugbe zuru oke bụ 0,5.
Ihe nchịkọta: ma ọ bụrụ na H dị mma, a na-etinye mgbapụta ahụ n'ụzọ dị mma, ma ọ bụghị ya, a na-arụ ya na ụzọ ịdọrọ.
Rịba ama: Ọ dịghị mkpa iji ọnụ ọgụgụ dị elu karịa ọnọdụ zuru oke. Naanị mgbe anyị jiri mgbapụta na ọnọdụ ndị a, anyị kwesịrị ịgbakọ H:
1. Elu okpomọkụ dị elu;
2. Ọsọ ọsọ na-abawanye karịa uru a tụrụ aha;
3. Isi ihe nkedo bụ nnukwu ma ọ bụ eriri mmiri dị n'ime ogologo oge;
4. Nsogbu nke ụwa dị obere;
5.Ọdịiche na-adịghị mma.
Nhọrọ nke nfuli
Nhọrọ nfuli kwesịrị ịdabere na:
Isi ọrụ nke mgbapụta ahụ.
Ihe omimi di iche iche di ka nrughari uzo dika uzo di elu di iche iche, ihe ngbagwoju anya na nkpo okwu,
Pump arụmọrụ wdg.
Ihe nchekwa ihe
A na-ejikarị usoro nhazi akara arụ ọrụ
1. Isi ọrụ nke mgbapụta ahụ:
Site na ọrụ a, ọ ga-ekwe omume ịhọrọ mgbapụta na mgbakwunye nke eserese na-egosi na "& nbsp; data.
2. Nkọwa ihe omimi:
Mgbe a na-agbanye mgbapụta ihe ndị na-esonụ, a ghaghị ịza ajụjụ ọnụ: 'A na - achọgharị na nrụgide na nkwụsị na njedebe.' ∎ Nrụgide nrụgide n'ihi nrịba dị elu. "Ụdị nkwụsị na pipework (Hf) ka fig.1) O nwere ike. Â • İk ™ r ™ kachas∫ mma n'®z ™ d∫ka ∫ch ™ r ™ d∫r∫. ¢ NPSH value.â € ¢ Maka nchịkọta nke NPSH uru, lee ederede ndekota kwekọrọ.
3. Kpochapụ arụmọrụ:
Tupu ị chọpụta njirimara kachasị mma, a ghaghị ịmatakwu ọrụ nke windo ahụ. Ọ bụrụ na mgbapụta a na-atụ anya ka ọ rụọ ọrụ dịka otu ọrụ ahụ, wee họrọ mgbapụta BL nke na-arụ ọrụ na arụ ọrụ na-arụ ọrụ na arụmọrụ kacha mma nke mgbapụta ahụ.
Dị ka mgbapụta na-adabere na ọganihu kachasị mma, ọ dị mkpa mgbe niile ka ịchọta ọrụ na-arụtụ aka na ntinye arụmọrụ (eta) iji mee ka ịdị elu dị elu mgbe mmiri ahụ na-ada.
4. Ngwongwo ihe:
Nhọrọ nke mgbapụta njikọ na-adabere na nrụgide a na-arụ na ngwongwo. ihe mgbapụta ahụ na-enye dịgasị iche iche njikọ njikọta dịka:
5. Ntọala nhazi usoro ihe eji eme ihe
Ubi Ngwa Ụdị akara akara Ihe akara akàrà
Ụdị Ọpụrụiche 1 2 3
Akụkụ ntụgharị Usoro Oghere akụkụ Usoro Elastomers Usoro Mmiri mkpakọ Collor Usoro
0â "ƒ ka + 90â" ƒ mmiri dị ọcha a- Graphite A SiC S FPM F SUS304 C OBB
0â "ƒ ka + 90â" ƒ mmiri dị ọcha a- WC W Graphite A FPM F SUS304 C WAFC
+ 90â "ƒ ruo 120 + ƒ nkwụsịtụ na-emebi emebi a- SiC S SiC S EPDM E SUS304 C SSEC
ruo 0â "ƒ a- WC W WC W EPDM E SUS304 C WWEC
Ụdị ụdị akara Pump nlereanya d1 d2 h
Nrụgide Ọrụ Oke
A na-egosipụta ókè nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ dị na fig.4 na-esonụ, nrụgide na okpomọkụ ga-adị na nke fig. 4.
Mkpụrụ Igwe kachasị elu
Mgbe mgbapụta ahụ na-arụ ọrụ na ebe okpomọkụ okpomọkụ dị elu karịa ogo 40' ƒ ma ọ bụ elu dị elu karịa 1000m, ikepụta nke ike P2 ga-ebelata n'ihi ịda ogbenye na-eme ka mmiri dị ala dị elu. N'ihi ya, n'ọnọdụ ahụ, mgbapụta ahụ Kwesịrị iji ígwè dị elu.
Okpokoro arụ ọrụ - BL (T) 2
A na-atụ aro ka a jiri ya rụọ ọrụ.
Ogologo ịrụ ọrụ - BL (T) 4
Ogologo ịrụ ọrụ - BL (T) 8
Ogologo ịrụ ọrụ - BL (T) 12
Okpokoro arụ ọrụ - BL (T) 16
Okpokoro arụ ọrụ - BL (T) 20
Ogologo ịrụ ọrụ - BL (T) 32
Ogologo ịrụ ọrụ - BL (T) 45
Okpokoro arụ ọrụ - BL (T) 64
PN25-40 / DN100 ọkọlọtọ flange, na arịrịọ.
Ogologo ịrụ ọrụ - BL (T) 90
Ogologo ịrụ ọrụ - BL (T) 120
Okpokoro arụ ọrụ - BL (T) 150
Ngwakọta ngwongwo ibu
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Pumps, Multi-Stage Centrifugal Pumps supplier, Vertical Multi-Stage Centrifugal Pumps for sale, China Vertical Multi-Stage Centrifugal Pumps, Vertical Multi-Stage Centrifugal Pumps companies, best Vertical Pumps Multi-Stage Centrifugal, Vertical Multi-Stage Centrifugal Pumps price, buy Vertical Multi-Stage Centrifugal Pumps